Nnukwu mmanụ dị mkpa Bergamot - Zụrụ n'Onlinentanet | AromaEasy
E si na osisi bergamot oroma, Bergamot Mmanụ dị mkpa nwere ihe ụtọ citrus na-atọ ụtọ nke ukwuu.
A na-eji mmanụ sitere na bergamot oroma eji ọtụtụ nzube. Ọ bụ ekpomeekpo pụrụ iche na tii Earl Gray, ihe odide citrus na-esi ísì ụtọ yana isi ihe dị na swiiti.
nha Họrọ otu nhọrọ0.1 N'arọ (Italy) - $ 37.840.5 N'arọ (Italy) - $ 165.551 N'arọ (Italy) - $ 315.4410 N'arọ (Italy) (mgbe ego kwụsịrị) - $ 2996.6225 N'arọ (Italy) (mgbe ego kwụsịrị) - $ 7097.31 Clear
Bergamot Mkpa mmanụ N'ogbe E220 ibu
SKU: E220-Bergamot Categories: All Products, Nnukwu Mkpa mmanụ, Ngwa mmanụ dị mkpa, Mmanụ Dị Mkpa Dị Mkpa
bergamot mmanụ dị mkpa
AromaEasy na-agbasi mbọ ike inye mmanụ dị oke mkpa, nke dị ọcha, na nke nwere ezigbo ego maka ego ọnụ.
Mmanụ anyị bụ Bergamot Mkpa sitere na ndịda Italy, bụ ebe ọtụtụ bergamot na-eweta n'ụwa. Oyi site na rind nke oroma bergamot nke a na-akọ n'ugbo a na-esutu ọnụ, mmanụ bergamot anyị na-enye nwere ihe na-enwu gbaa, na-atọ ụtọ ma na-esi ísì ụtọ na-enwe ntụ nke oseose na ifuru. Iji ya naanị nwere ike ịmepụta izu ike ikuku, mgbe agwakọta ya na ndị ọzọ na citrus mmanụ nwere ike inye gị ọbụna ihe na-atọ ụtọ ahụmahụ.
All nke anyị mkpa mmanụ zutere siri ike ụkpụrụ iji hụ na ị na-na-a ngwaahịa na dabara gị mkpa n'emebighị àgwà.
Ọ bụrụ na ị nwere nnukwu mmanụ dị mkpa maka ịre ahịa n'ahịa, biko kpọtụrụ anyị.
Nkọwa nke mmanụ mmanụ AromaEasy Bergamot
Aha sayensị: Citrus bergamia
Akụkụ Osisi: Peels
Usoro Mwepu: Oyi kpuchiri
Ọdịdị: A-acha odo odo na-acha odo odo mobile mobile mmiri mmiri
Ngwakọta Nke Ọma: Oji Eji, Clary Sage, Coriander, Cypress, Eucalyptus, Frankincense, Geranium, ginger, Helichrysum, Jasmine, Junipa, lavender, Oroma nkịrịsị, Mandarin, Aha ya bụ Marjoram, Melissa, Myrtle, Neroli, Nutmeg, Oroma (Sweettọ), Palmarosa, Patchouli, Rose, Rosemary, Sandalwood, Ugochukwu, Osisi Tea, Thyme, Vetiver, Violet, Ylang ylang.
Abamuru nke Bergamot Mmanụ Mkpa
Mgbaze Mgbarụ Ahụ
Bergamot mkpa mmanụ nwere mgbochi mkpali Njirimara, nke na-kweere na-akwalite mgbaze, belata cramps na ndị ọzọ afo mgbu na belata afọ ntachi.
Mee ka ahụ ike dịkwuo mma
Na antimicrobial na antibacterial ogige, bergamot mkpa mmanụ nwere ike belata mbufụt na-emeso ihe otutu breakouts.
Mgbochi antioxidants ndị dị na mmanụ bergamot nwere ike belata nhụcha nke ntụpọ ma ọ bụ ọnya otutu.
Tinye mmanụ na taner ma ọ bụ ude gị na usoro nlekọta anụ abalị gị iji nweta akpụkpọ anụ dị nro.
Mee ka ọnọdụ gị dị mma
Bergamot mmanụ dị mkpa bụ ihe nkwalite ọnọdụ obi, dịka ọ nwere ike ịkwalite mmetụta nke obi ụtọ ma belata esemokwu, nchekasị na ịda mba.
Dingtinye ihe ole na ole na onye na-ekesa gị na ịmị ụtọ ụtọ nke mmanụ bergamot nwere ike ịdị irè iji melite ụra.
adọ aka ná ntị
Biko kpọtụrụ dọkịta gị tupu iji ngwaahịa a n'oge ime ime.
A na-atụ aro ule anụ ahụ tupu iji mee ihe ma ọ bụrụ na ị nwere akpụkpọ anụ.
AromaEasy anaghị ekwe nkwa ido okwu a anya.
E kwesịghị iwere ozi ahụ dị ka ndụmọdụ gbasara ahụike.
Lelee mmanu mmanu mmanu oma nke AromaEasy EBE A.